Somaliland.Org » Xaflad wacdaro leh oo loogu wanqalay Gobolka Hawd oo maanta ka dhacay Balligubadle
Xaflad wacdaro leh oo loogu wanqalay Gobolka Hawd oo maanta ka dhacay Balligubadle
June 29th, 2008 Comments Off Balligubadle (Somaliland.org) – Xaflad ballaadhan oo loogu wanqalayey magacaabista cusub ee Hawd ayaa maanta lagu qabtay magaalada xarunta u ah gobolkaas ee Balligubadle.
Munaasibaddan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay, isla markaana labadii maalmood ee u dambeeyey ay ku qulqulayeen dadweyne tiro badan oo ka kala yimi magaalooyinka Somaliland, kuwa dalalka deriska iyo dunida dacalladeeda, waxa lagu tilmaamay in ay ahayd xafladdii ugu ballaadhnayd ee soo martay geyiga Somaliland, marka laga reebo aaskii marxuum Cigaal,marka la eego dadweynaha meeshaas isugu tegey, iyadoo ay jireen dhallinyaro lug kaga baxay Hargeysa si ay uga qaybgalaan munaasibadda waqlasha Gobolka Hawd oo lagu qabtay degmada Balligubadle oo caasimadda u jirta qiyaas aan ka yarayn 50km.
Xafladdan oo ay ka qaybgaleen kumanaan qof oo ay ku jiraan masuuliyiin tiro badan oo ka kala socday hay’adaha dawladda Somaliland, axsaabta mucaaradka, madax-dhaqameedyo iyo madax ka socday Ismaamulka Soomaalida Itoobiya, waxa lagu soo bandhigay masraxiyado isugu jira riwaayado iyo ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka.
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) oo ugu horreyn hadal kooban ka jeediyey munaasibaddaa, ayaa tilmaamay in Degmada Balligubadle ee loo dabbaal-degayo gobolnimadeeda cusub ay tahay mid taariikh weyn ku leh halgankii qadhaadhaa ee dib-u-xorreynta Somaliland, waxaannu hambalyo u diray shacbiga ku dhaqan Gobolka cusub ee Hawd iyo dhammaan shacbiga Somaliland.
Madaxweyne-ku-xigeenka,. Axmed Yuusuf Yaasiin oo munaasibadda loogu wanqalayey Gobolka Hawd, ayaa tilmaamay in booqashada waqtigan ee Balligubadle ay xambaarsan tahay siro ka xeeldheer dabbaaldegga gobolka cusub. Waxana uu yidhi, “Maanta waxa halka la isugu yimi xaflad qudha, waxaanad mooday in mujaahidiintii halkan ka hadlaysay in aanay fahmin sir ama nuxurka halkan [Gobolka Hawd] la isugu yimi, ma